Ny zavatra niainako tamin'ny router sy ny tambajotran Wi-Fi | Avy amin'ny Linux
Amin'ity lahatsoratra ity dia tiako ny milaza aminao ny momba ny zavatra niainako tamin'ny router manokana sy ny tamba-jotra Wi-Fi ahy. Voalohany indrindra lazaiko aminao. Mipetraka miaraka amin'ny rahavaviko sy reniko aho, mampiasa laptop izy ireo ary matetika mampiasa ny solosaina birao, ireo solosaina roa ireo dia azo ampifandraisina amin'ny alàlan'ny Wi-Fi, na dia aleoko aza mifandray amin'ny tariby ary manao azy tsy misy tariby ilay laptop.
Zavatra efa nataoko ary mieritreritra aho fa ny olon-drehetra koa nanao izany, dia ny manandrana mijery hoe manao ahoana ny mpifanolobodirindrina amiko amin'ny resaka solosaina, ny fomba mety hidiran'izy ireo amin'ny tambajotra misy ahy. Mihevitra aho fa manaiky isika rehetra fa tsy mahalala zavatra betsaka izy ireo, ary tsy hisy hanafika antsika. Fa raha mampiasa lojika isika, raha milaza izany daholo isika. Ka maninona no misy ny fanafihana? Izany no antony ilazako fa ny mpifanila vodirindrina amiko dia mpijirika avokoa mandra-pahatongan'ny fomba hafa.
Ka dia nanao configurations maromaro ho an'ny router-ko aho hahatonga azy io ho azo antoka kokoa ary hilalao kely ihany koa amin'ireo mpiara-monina amiko.
Manana router aho CISCO DPC2425 miaraka amin'ny Play Triple de CLARO Kolombia.
Na dia voarara aza ny fidirana amin'ireo router amin'ny alalàn'ny mpampiasa ahy .. Andao .. iza no manaraka io lalàna io? Tsy maintsy nitety zavatra be dia be aho hahazoana azy io, tsy hiresaka amin'ny antsipiriany momba ny fomba nanaovako azy aho, ny azoko lazaina aminao dia ireo router sy Thompsons ireo (tao amin'ny roa ihany no nanandramako azy) dia misy ilay solonanarana mitovy sy tenimiafina mitovy ihany ahafahana miditra amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo 8080. Tsy ilaiko azy ireo ny teny miafina satria…… hopefully (antenaina fa tsy hamaky ity bilaogy ity ireo Claro).
Ny tiana holazaina dia hoe noho ny antony miharihary dia tsy tiako hisy olona miditra amin'ny router lavitra ahy toy ny mahazatra. Alefaso ihany ny «Remote Config Management»
Atolotro anao ny Router-ko.
Tao amin'ny "Advance Settings" "Safidy" dia afaka nanala izany aho.
Ny zavatra faharoa nataoko dia nanova ny teny miafina fidirana.
Ary izao raha mandeha amin'ny zavatra tonga isika, ny fikirakirana Wi-Fi:
Ao amin'ny fizarana Basic, hitako izao manaraka izao.
En Miditra amin'ny Point, vonoinay fotsiny ny serivisy Wi-Fi.
El SSID Mazava ho azy fa anaran'ilay Tambajotra io.
En Karazana tambajotra Nisafidy Closed aho, tamin'ity fomba ity dia ho takona ny tambajotra ary tsy hanambara ampahibemaso ny SSID, ary amin'izany dia hanafaka ny maro amin'ny fakam-panahy.
Ary avy eo misafidy ilay fantsona ao anaty spectrum hampiasain'ny tambajotra aho.
Avy eo nisafidy ny teny miafiko aho ary karazana fiarovana inona no ho entiny.
Araka ny hitanao dia nisafidy Wpa2-PSK aho. Amin'ny encryption dia tsy afaka nametraka ny Tkip + AES aho satria somary antitra ny laptop-neny ary tsy manana an'ity fanohanana ity aho, saingy mety ho nampiasa izany aho.
Betsaka no hiteny fa ampy izany, ary mety izany. Saingy somary tsy milamina aho ary nankany amin'ny takelaka antsoina hoe "Access Control" ary sendra izany aho.
Toerana hametrahana MAC ary hisafidy ny handà ny serivisy na hanome alalana azy. ary ny lisitry ny fifandraisana napetraka tamin'izany fotoana izany.
Fantatro ... taiza no nahazoako ilay MAC? Hay, hay fa indray andro dia navelako tsy nisy teny miafina ny tambajotranoko ary tao anatin'ny minitra vitsy dia efa ho 8 ny fitaovana efa nifampitohy teo anelanelan'ny finday finday, solosaina finday, sns. Ary nanomboka nanakana azy ireo tsirairay aho. Ary rehefa mieritreritra an'izany aho dia tokony ho mora kokoa ny nanome alalana ireo MAC 2 irery tao an-tranoko. Fa hoy ianao, mianatra isan'andro ianao.
Eny izao. Vonona, azo antoka daholo ... TSIA 😀
Nandeha tany amin'ny "Network Configuration" aho ary nanao an'io.
Raha ny mahazatra ny LAN dia manana IP Class C toa ny "192.168.0.0", novaiko ho kilasy B (tsy dia mahazatra loatra), "172.26.0.0".
Tsy dia azo ampiharina irery io fa ho hitanao avy eo ny antony anaovako azy.
Aza amboary ny IP-tenako amin'ny DNS satria tsy mijanona ny IP-ko ary isaky ny manova azy ny ISP dia lany serivisy aho ary mila manamboatra azy indray. Ka avelako toy izao izy, ary ovako amin'ny DNS ny DNS-ny.
Ny zavatra manaraka dia ny fanaovana zavatra izay toa tsy dia mitombina loatra amin'ny maro, fa holazaiko anao ny antony nanaovako azy.
I DEACTIVATED THE DHCP NY ROUTER. Eny tompoko.
Nataoko izany raha toa ka misy olona mahavita miditra amin'ny tambajotranoko, na mivoaka ny teny miafina (rangahy, manan-janako sy rahavaviko aho), dia tsy voatendry IP izany olona izany. Ary raha zavatra amin'ny fiainana no hainy manome IP amin'ny tanana, dia TSY ho fantany izay IP an'ny tamba-jotra amiko, izany hoe ny "172.26.0.0" (efa nisy dikany io, sa tsy izany?)
Fa ahoana izao? Ahoana no ahafahako mampifandray azy ireo nefa tsy mila isaky ny PC mandamina ny IP?
Ny router-ko dia misy antsoina hoe Fanendrena IP CPE raikitra«, Amin'ny toerana izay dia manendry IP static ho an'ny MAC manokana aho, ary arak'izany dia esoriko ny tsy maintsy mandeha any amin'ny pc tsirairay ary ataoko amin'ny solo-sainako izany.
Ary noho izany, isaky ny mampifandray ny MAC dia voatendry ho azy ilay IP.
Heveriko fa izany ihany. Fahafinaretana ny mizara aminareo traikefa kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ny zavatra niainako tamin'ny router sy ny tamba-jotra Wi-Fi ahy
Mampiasà vatosoa iray izay ny router, raha tsy izany dia tsy manampy be loatra ny fanalana ny ssid raha toa ka manana fitaovana (kismet) ny mpifanila vodirindrina aminao, ny zavatra tsara indrindra hitako dia ny wpa2.
Izaho dia manana ny endriny rehetra tahaka ny anananao. Mikasika ireo mpifanolo-bodirindrina amiko dia nanao fitsapana aho tamin'ny famelana ny tambajotra hisokatra mandritra ny roa andro ary hanara-maso ireo fitaovana izay nifandray ary tsy nisy mistery afa-tsy ny ahy ihany no nifandray, ka nanatsoaka hevitra aho fa tsy manana fikasana ratsy momba ny hangalatra WiFi ireo mpifanila vodirindrina amiko 😛
Tena mampihomehy ny lahatsoratrao, mila zavatra fotsiny aho izay tokony ho navako hamita ny fampiasana ny Internet ho "tsy afaka" ho an'ny "mpifanolobodirindrina mpifanolobodirindrina" (na dia tsy fantatro raha mitondra izany safidy izany ny router): fanaraha-maso ny fidirana amin'ny Internet ; zavatra mitovy amin'ny sivana mac, izay no ahafantarana ny "control access" lazainao eto; ny fifehezana fidirana dia tsy manakana azy ireo tsy hifandray amin'ny tamba-jotra -na ny sivana mac dia manao izany-, fa na dia mifandray amin'ny tamba-jotra aza izy ireo dia tsy hanome azy ireo fidirana amin'ny alàlan'ny vavahady internet ... puedes azonao atao aza ny mamela ny kelinao rahavavy hizaha ny ora voafaritra ihany (, 6) http://i.imgur.com/3kITo.png
Hehe Ka araka ny voalazanao. Tsy manana izany ny router-ko, fa misy zavatra antsoina hoe "Parental Control:" Izay ahafahako mamorona mpampiasa ary mamela na tsy miditra amin'ny internet na pejy sasany. Ny tiana hambara dia tsy azo tendrena MAC na IP manokana izy io. Izay no tsy nampiasako azy. Satria hisy fiantraikany amiko koa xD
Ary koa amin'ny ora sy andro sasany. manome hazo kely aza aho.
Ho fepetra fiarovana fanampiny, azonao atao ny misafidy ho toy ny lakile nizarana mialoha ny filaharan'ny tarehin-tsoratra izay manakana ny fiezahana hahita azy amin'ny alàlan'ny fanafihana mahery vaika. Ohatra, azonao atao ny mampiasa zavatra toa ny tolo-kevitr'izy ireo https://www.grc.com/passwords.htm
^ ___ ^ tena tsara → "ny mpifanila vodirindrina amiko rehetra dia mpijirika mandra-panaporofoana raha tsy izany"
+1, hoentiko any amin'ny Twitter izao. xD
xD Izany no fiarovana, tsy toy ny an'ny mpifanila vodirindrina amiko ... ho an'ny zavatra amin'ny fiainana ao an-tranon'ny havako izay tsidihiko matetika, tsy misy Internet, ka tsy maintsy nahazo teny miafina aho ... rehefa afaka kelikely dia tsy afaka Mifandraisa, toa lasa ry zalahy avy any Speedy mba "handrindra" ny tamba-jotra ka tsy azon'izy ireo angalarina ny Wi-Fi anao
… Ny hany nataoko dia ny nanova ny encryption avy amin'ny WEP ho WPA… ary ta raan, mifandray, tsy novain'izy ireo akory ny teny miafina .. GENIUS xD
Fahasoavana lehibe iray hafa an'ny Speedy .. rehefa manamboatra ny tambajotran'ny Wi-Fi ianao dia mahazo hafatra hanoroana ny tenimiafinao ... milaza aminao izy hoe "ampiasao ny nomeraon-telefaonanao miaraka amina 11 eo anoloana" ary maro no tsy mahalala izay fantany manao .. izy ireo dia mihaino azy
Fantatra ve ny olana? xD Mila fantatro fotsiny ny nomeraon-telefaona NY MPANARAKA ahy (tiako holazaina fa tsy ny mpivaro-kena) ary mametraka 11 hanana wifi maimaim-poana ...
tena mahaliana ny lahatsoratrao! Holazaiko vetivety aminao ny zavatra niainako….
ny manomboka ny Internet ato an-tranoko dia anao, ary omeny anao fotsiny ny modem tsy misy internet tsy misy tariby, ho an'ny wifi dia mila mividy drafitra hafa ianao (aaaaa .. izany no antony nandraran'izy ireo tsy hampiasa router xD) Nahazo router MSI ny raiko (Eny, Mampiasako ny kahie ary ny findaiko ary ny reniko koa ny findainy smartphone) Nanana fahatsapana ratsy foana tamin'ireo mpiara-monina tamiko aho, fantatro fotsiny fa halako tsy misy antony izy ireo na zavatra toa izany hahaha, avy eo rehefa fantatro fa manana solosaina izy ireo, napetrako ny fepetra fiarovana faran'izay henjana indrindra, ny sivana WPA2-PSK, ny sivana MAC ary ny teny miafin'ny tarehin-tsoratra 62 hahaha (matotra io -__-), na izany na tsy izany, heveriko fa nanjo ahy io…. satria taty aoriana dia tsapako fa ny mpifanila vodirindrina amiko REHETRA dia manana wifi miaraka amin'i WEP sy izaho http://i.imgflip.com/1bgw.jpg
Hahaha, ny fomba fanendasanao sy ny mpifanolobodirindrina amin'i zoydberg faly amin'ny alahelony.
hahahahaha (raha vazivazy = marina) paranoia firy no noeritreretinao momba ny famonoana ilay modem dia apetaho amin'ny boaty hamehezana azy amin'ny kasety, ao anaty vatasarihana mihidy (farano raha)
Raha ny ahy (Mexico / Telmex) manana Internet 6MB aho, ny modem dia misy ny encryption WEP sy ESSID amin'ny alàlan'ny default, mora dia mora ny "hack" amin'ny generator tenimiafina, nataoko izany, ary na dia fantatro tsara aza ny fomba amboary ho sarotra be ilay izy, aleoko tsy mifandray. Mifandray amin'ny solosaina finday na smartphone ny mpitsidika ary lazaiko azy ireo, te-hisotro zavatra ve ianao, soda? ny lakilen'ny wi-fi? Heveriko fa raha mbola ireo izay mihantona amin'ny Internet, manao azy io hijerena horonantsary amin'ny YouTube, hiresahana amin'ny Facebook, na hivezivezy toy ny olona tsotra fotsiny, dia tsy manana olana aho, raha manelingelina ahy be izany raha mandany tontolo andro izy ireo misintona GB sy GB tsy haiko hoe ... ary deboren ny fantsom-pifandraisana rehetra 🙂
Hampitandrina ny mpiara-monina aminay izahay mba hamelezany anao noho ny ratsy ratsy nataony
Locuest dia hoy izy:
Hey, nivadika io router io ihany aho fa tsy afaka miala aminy ny teny miafina ary ireo tsy misy ilàna azy mazava ho azy amin'ny fangatahana azy ireo hanokatra seranana ho an'ny imbesile dia natsipiny nandritra ny 1 andro ny tambajotran -_- avy eo pistics sasany tamin'ny fomba nataonao? Tena tiako izany
Valiny amin'i Locuest
Ry namako, ampio aho rehefa miditra amin'ny reuter misy tenimiafiko azoko tamin'ny Internet aho, atsipazo am-panamboarana izany ary amin'ny fandrosoana
((((Tsy mandeha ity fiasa ity.
Ity fampiasa ity dia tsy azo alefa amin'ny modem tariby. Raha hivoahana amin'ity pejy ity dia safidio ny iray amin'ireo kiheba hafa na tsindrio ny bokotra "Miverina" eo amin'ny baraovana
Mitranga izany satria manandrana miditra amin'ny tambajotra mitovy (LAN) ianao. Miaraka amin'ny mpampiasa admin miaraka amin'ny teny miafina izay manomboka amin'ny Ut - ****
Jereo ity lahatsoratra hafa ity izay anehoany anao ny fomba hanamorana azy.
Juan Correa dia hoy izy:
Compadre, tiako ho fantatra hoe inona ireo fepetra roa tokony hidirana amin'ny router. Tena tsara momba ny wlan fa ny fiarovana dia mbola azo atao mihoatra ny tsara kokoa noho ny router raha manampy ahy amin'ny fitakiana ianao dia ho tianao io. signusyoga-@hotmail.es izany ny mailako manantena aho fa afaka manampy ahy ianao
Misaotra betsaka compadre ha ary tohero ny fehezan-teny hoe "" "" "" "mpifanolobodirindrina amiko rehetra mandra-pahatongan'ny fotoana hafa voaporofo" "" "
Valiny tamin'i Juan Correa
Ampidiro ny namana ny router cisco dpc2425 miaraka amin'ny safidy reset. Manova ny tenimiafiko aho ary manafoana ny boaty .. milamina ny zava-drehetra mandra-pifandraisany amin'ny Internet ary tsy mandeha amin'ny laoniny ny dingana rehetra efa natao .. misy vahaolana sa fanampiana ??? Misaotra tamin'ny hevitrao
ny router cisco dcp2425, efa nanandrana niditra nandritra ny alina maromaro aho, saingy tsy misy na iray aza ny teny miafina amin'ny Internet miasa ho ahy, misy afaka manampy ahy ve?
Salama manana iray amin'ireo mpamily aho fa tsy haiko hoe inona ny teny miafina default hiditra ao amin'ny cisco
Lahatsoratra tsara hiarovana antsika: D.
Ao amin'ny tamba-jotra dia hitako fa ity dia iray amin'ireo toerana kely ifampizarana hanamboarana ity router ity, manana router iray ihany aho miaraka amin'ilay orinasa iray ihany (mazava ho azy) manandrana manokatra seranana sasany hahafahany mahita ireo fakantsary ip avy amin'ny ny any ivelany fa tsy haiko, miditra amin'ny Port Filter, Port Forwarding, Port Triggers ary DMZ Host configuring izay ilaina fa tsy misy, mihidy foana ny port. Misy fomba ahafahako manokatra seranana ve? Tsy manana port 80 misokatra ho an'ny mpizara tranonkala T_T tsotra akory aho.